Wafdi ay la socdeen laba wasiir oo markii labaad lagu weeraray wadada isku xirta shalaambood iyo Afgooye markii danbana wasiiradadii ..... | Somalisan.com Home
Wafdi ay la socdeen laba wasiir oo markii labaad lagu weeraray wadada isku xirta shalaambood iyo Afgooye markii danbana wasiiradadii ..... 12/3/2012 6:34:00 P
waxaana markiidanbe Muqdisho lagu geeyey diyaarad qaas ah wasiirada iyo ciidamo dhawac soo gaaray Waxaa maanta mar kale weerar culu lagu ekeeyay wafdi wasiiro u badan kuwaasoo xalay ku hoyday magaalada Marka. Werarka ayaa dhacay xili ay maanta u soo safreen dhanka magaalada Muqdisho waxaana loo galay inta u dhexesa Buufow iyo Shalaanbood. Wafdiga la weeraray waxaa ka mid ahaa Wasiirka difaaca C/xakiin Xaaji Fiqqi iyo wasiirka arimaha gudaha C/kariin Xuseen Guuleed iyo saraakiil ciidan kuwaasoo saacadihii ugu danbeeyay socdaal shaqo ku joogay gobollka shabeelaha hoose waxaana markiidanbe Muqdisho lagu geeyey diyaarad qaas ah wasiirada iyo ciidamo dhawac soo gaaray .
Gudoomiyaha gobolka Sh/hoose ee dowlada Somalia C/qaadir Maxamuud siidii oo ka hadlayay weerarka khasaaraha nafeed dhaliyay ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan xoogag Al-shabaab ay jidka u galeen wafdigii ka socday dowlada ee saaka ka soo ambabaxay magaalada Marka kuna soo jeeday magaalada Muqdisho. Weerarka ayuu gudoomiyihu sheegay inay ku bilowday miino la kacday ilaalada taliyaha boliiska soomaaliya Jen. Shiikhunaa Maye kadib uu bilowday weerar fool ka fool ah kaasoo socday ku dhawaad 30 daqiiqo. Inkastoo uusan gudoomiyuhu sheegin tirada dadkii weerarka ku dhintay ayuu hadana sheegay in qaraxa miino ay dhimasho iyo dhaawacba gaarsiisay ilaalada taliyaha ciidamada Booliiska Soomaaliyeed. Dadka goob joogayaal ah ayaa qiyaasay in ugu yaraan 10 askari oo ciidamada Dowlada ay qaarna dhinteen kuwana dhaawacmeen markii weerarkaani uu qabsaday mana jirto wax mas’uul ah oo la soo sheegayo inuu khasaare ka soo gaaray weerarkaasi.